China Die mgbatị akụkụ Manufacturer na Supplier | Meste
Die mgbatị akụkụ ejiri zinc, ọla kọpa, aluminom, magnesium, lead, tin na lead allo alloys na alloys ha, nke gbazee na nnukwu okpomọkụ ma gbanye n'ime oghere ebu ma wee dị mma n'okpuru nrụgide
Metal anwụ mgbatị akụkụbụ ụdị nrụgide mgbatị akụkụ. Ọ bụ a ụdị mgbali mgbatị n'ibu-anwụ mgbatị igwe onwem na a mgbatị-anwụ. Ọ na-eji ọla ndị dị ka ọla kọpa, zinc, aluminom ma ọ bụ aluminom alloy kpụ ọkụ n'ọnụ na mmiri mmiri ka ọ wụba n'ọdụ ụgbọ mmiri nke igwe na-anwụ anwụ. Mgbe ịnwụ-nkedo site na-anwụ-mgbatị igwe, ọ nwere ike igba ọla kọpa, zinc, aluminum akụkụ ma ọ bụ aluminum alloy akụkụ na mmachi udi na size nke na-anwụ. A na-akpọkarị akụkụ ndị a akụkụ ndị na-egbu mmadụ. Die mgbatị nwere aha dị iche iche n'ebe dị iche iche, dị ka ndị na-anwụ-mgbatị akụkụ, mgbatị mgbatị, anwụ-ningfe akụkụ, anwụ-n castfe aluminom, anwụ-ningfe zinc, ịnwụ-mgbatị ọla kọpa, ọla kọpa anwụ-ife, zinc anwụ-ningfe, aluminom anwụ-mgbatị aluminum anwụ-mgbatị, aluminum anwụ-n diefe alloy, aluminum alloy anwụ-ningfe akụkụ, wdg
Uru nke metal anwụ mgbatị akụkụ:
(1) Ezigbo akụkụ ziri ezi (dabere na ihe nkedo, mana nke mbụ 2.5cm (0.004 inch maka 1 inch mbụ) na-abụkarị 0.1mm, 0.02mm maka mmụba 1cm ọ bụla (0.002 inch maka mmụba 1 ọ bụla).
(2) Ezigbo nkedo elu (RA 1 - Micron 2.5 ma ọ bụ 0.04 - Micron 0.10). Enwere ike ịgba mgbidi dị larịị ma e jiri ya tụnyere aja na nkedo na-adịgide adịgide (ihe dịka 0.75 mm ma ọ bụ 0.030 na). Enwere ike ịtinye ihe ntinye (dịka ihe ntinye eri, ihe ndị na-ekpo ọkụ na ebe a na-ebu ike dị elu). Belata ma ọ bụ wepu usoro ọrụ nke abụọ. Ngwa ngwa mmepụta ngwa ngwa. Nkedo ike mgbatị ahụ ruru 415 MPa (60 Ksi).
Diskọ ihe ụfọdụ nke metal anwụ mgbatị
(1) Ọnụ ego isi obodo dị oke elu. E jiri ya tụnyere usoro mgbatị ndị ọzọ, akụrụngwa nkedo achọrọ, ebu na akụkụ ndị metụtara ya dị oke ọnụ. Yabụ, iji mee ka ịnwụ anwụ na-akpata usoro akụ na ụba, achọrọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmepụta.
(2) Maka ọla nrugharị dị elu naanị, ịdị nro ga-adị n'etiti 30 g (1 oz) na 10 n'arọ (20 lb).
(3) Na ọkọlọtọ anwụ mgbatị usoro, a ga-enwe obere ego nke pores ikpeazụ mgbatị. Nke a nwere ike igbochi ọgwụgwọ ọkụ ma ọ bụ ịgbado ọkụ, n'ihi na ikpo ọkụ ga-eme ka mgbasa gas dị na pores, nke ga-eme ka micro cracks na elu peeling na akụkụ ahụ, yabụ ọghọm metụtara metụtara nkedo anwụ bụ na ọ na-emetụta naanị akụkụ ndị nwere nro dị mma. Achọghị akụkụ ndị na-achọ ka obi sie ike (site na isi ike ma ọ bụ ime ka ikpe sie ike) na iwe iwe.
Ngwa nke metal anwụ mgbatị akụkụ:
N'ihi na nke uru nke metal anwụ mgbatị akụkụ, ọ na e ọtụtụ-eji, tumadi na uka mmepụta nke na-abụghị ferrous alloy oge ọgbụgba. Na mmepụta nke ihe nkedo na-anwụ, ihe alloy alloy na-egbu maka ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu, na-atụle 30% - 50%; zinc alloy anwụ-mgbatị bụ nke abụọ; ọla kọpa alloy ịnwụ-mgbatị kpatara 1% - 2%. Ndị kasị n'ọtụtụ ebe na-anwụ anwụ mgbatị akụkụ bụ ụgbọala na traktọ n'ichepụta, sochiri ngwá n'ichepụta na electronic ngwá ụlọ ọrụ, na-akọ ugbo ígwè, mba agbachitere ụlọ ọrụ, kọmputa, ọgwụ na ahụ ike na ndị ọzọ na n'ichepụta ụlọ ọrụ. Akụkụ ndị e mepụtara site na usoro mgbatị anwụ anwụ gụnyere ngọngọ cylinder engine, mkpuchi cylinder, igbe gearbox, mkpuchi engine, shei na mgbodo nke ngwa na igwefoto, ọkpọkọ ọkpọkọ, gia, wdg.
ypical metal anwụ mgbatị akụkụ na-eji:
Aluminium anwụ mgbatị moto ụlọ
Industrial aluminum anwụ mgbatị akụkụ
Auto aluminum anwụ mgbatị ụlọ
Zinc anwụ mgbatị ụlọ
Zinc anwụ mgbatị isi
Nkenke Zinc anwụ mgbatị ụlọ nche
Die mgbatị igwefoto electronic obibi
Magnesium alloy anwụ mgbatị ikpe / mkpuchi
Die ife oriọna akụkụ
Die-mgbatị valvụ & mgbapụta ahụ
Die-mgbatị mma akụkụ
Die casting copper copper
Metal anwụ mgbatị akụkụ nwere ike arụpụtara dị ka anwụ-mgbatị ụgbọala akụkụ, anwụ-n diefe ụgbọala engine anwụrụ oyiyi akwa, anwụ-mgbatị ntụ oyi akụkụ, ịnwụ-mgbatị mmanụ ụgbọala engine cylinder isi, anwụ-ningfe valvụ rocker ogwe aka, ịnwụ-ningfe valvụ support, anwụ-mgbatị ike akụkụ, anwụ-mgbatị moto ọgwụgwụ cover, anwụ-mgbatị shei, anwụ-ningfe mgbapụta shei, anwụ-mgbatị ụlọ akụkụ, ịnwụ-mgbatị mma akụkụ, anwụ-ningfe castrail akụkụ, anwụ-ningfe wheel na n'akụkụ ndị ọzọ. Na anụ ụlọ n'ichepụta na mmepe nke akụrụngwa ụlọ ọrụ, na ngwá larịị nke na-anwụ mgbatị igwe e mma budata, ụdị nke akụkụ na ike ga-arụpụtara e gbasaa, na nkenke, mgbagwoju anya na size nke akụkụ nwere ike ịbụ anwụ cast enwewokwa ezigbo mma.
Metal anwụ mgbatị akụkụ ka na-n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ, ụgbọelu, ụgbọala, ụgbọ mmiri, electronic, eletriki na ndị ọzọ ọrụ n'ihi na ha pụrụ iche uru. Ọ bụrụ na achọrọ iji ngwaahịa gị, biko kpọtụrụ anyị. Anyị ga-enye gị mmepụta na ọrụ nke akụkụ anwụ nfe akụkụ jiri obi gị niile.
Nke gara aga: Die mgbatị usoro
Osote: CNC machining
Die Nkedo akpụzi Parts
Usoro Nwụrụ Anwụ